Wasiir Falagle “Shirkan haddii uu natiijo keeni waayo, inay arrinta Somaliya halis u muuqaneyso” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Falagle “Shirkan haddii uu natiijo keeni waayo, inay arrinta Somaliya halis...
Wasiir Falagle “Shirkan haddii uu natiijo keeni waayo, inay arrinta Somaliya halis u muuqaneyso”
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa ka hadlay shirka leesku mari la’yahay ee maalintii 3aad ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb.
Wasiirka ayaa tilmaamay in Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ay muujinayan dabacsanaan iyo garowshiyo ah in is afgarad laga gaaro shirka wadatashiga.
“Waxaa laga shirayaa waa arrinta doorashooyinka iyo sidii xal loo wada heli lahaa, shirka looma kala kicin habeen iyo maalinba waa socdaa. Run ahaantii waxaa ka muuqanaya dabacsanaan iyo garowshiyo in leesku muujiyo.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa xusay inay Madaxda wada qirsan yihiin, haddii aan shirkan wax heshiis ah laga gaarin, in dalku geli doono xaalad halis ah.
“Dhammaantood waxa ay ka siman yihiin waxa weeyaan in shirkan haddii uu natiijo keeni waayo, arrinta Somaliya inay halis u muuqaneyso. Marka is xilqaankaasi waa uu jiraa.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiir Falagle ayaa ku waramaya in qodobada qaarkood is afgarad laga gaaray, haddana loo fadhiyo qodobka uu muranka hareeyay ee ku aadan arrinta Gobolka Gedo.
“Saacadaan aan kula hadlayo shirka waa loo fadhiyaa oo qodobo dhiman baa laga hadlaya, meelaha qaarkoodna is afgarad baa laga gaaray, sida arrinta Somaliland ee Xubnaha Baarlamaanka. Arrinta haatan miiska saaran waa arrinta Gedo, ayaduna rogrog bay ku jirtaa, in guul laga gaaro oo isku si’ loo wadana dadka Soomaaliyeed meel ay jooggaanba rajo ayay ka qabaan.” Ayuu yiri Wasiir Falagle.
Falagle ayaa intaa ku daray haddii ay reer Galmudug yihiin inay rajo wanaagsan ka qabaan inuu guuleysto shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Haddaanu nahay Galmudug-na rajaanu ka qabnaa, maadaama gogosha anagu noo taalo, aad waxaan isugu tax-luujineynaa in shirka ka soo baxo midnimo loo dhan yahay oo wax ka tarta arrimaha Somaliya.” Ayuu sii raaciyay Falagle.
Tan iyo Arbacadii ayaa waxaa shirka Dhuusamareeb looga hadlaya saddex qodob, oo muhiim u ah doorashooyinka, waxayna kala yihiin cidda soo xuleysa Xildhibaanada Gobolada Waqooyi, arrinta Gobolka Gedo iyo diidmada horaan laga muujiyay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka qaarkood, oo Golaha Midowga Musharaxiinta dalbadeen in la bedelo.
Previous articleXaashi oo cadeeyay in Sabtida wax kulan ah la lahayn Madaxweynaha
Next articleWasiir Dubbe oo lagu wado inuu Warbaahinta la hadlo